Iiprojekti eziPhakamileyo zeSayensi zeZikolo eziPhakathi
Fumana Iingcamango zeProjekthi ye-Science Fair
Kungaba ngumngeni ukuza neengcamango zeprojekthi yezesayensi eziphambili. Kukho ukhuphiswano oluqinileyo ukuza nombono opholileyo kakhulu, kunye kunye ufuna isihloko esicatshulwa esifanelekileyo kumgangatho wakho wemfundo. Ndilungiselele iingcamango zeprojekthi ezifanelekileyo ngezesayensi , kodwa ungathanda ukukhangela iingcamango ngokwezinga lemfundo.
Projekthi ze Sikolo
Projects School Schools
Projekthi zeZikolo eziPhakamileyo
Le yithuba lakho lokukhanya! Abafundi besikolo esiphakathi banokwenza ngokuchanekileyo ngeeprojekthi ezichaza okanye zenza imifanekiso engumzekelo, kodwa ukuba unokuphendula umbuzo okanye usombulule ingxaki, uya kuba mkhulu. Zama ukuphakamisa i-hypothesis kwaye uyivavanye. Nika umxholo othethiweyo kunye nezixhobo ezibonakalayo, ezifana nemifanekiso okanye imizekelo yomzimba. Khetha iprojekthi onokuyenza ngokukhawuleza, ukunika ithuba lokusebenza kwingxelo (engekho inyanga). Izikolo zinokuthintela iiprojekthi zisebenzisa iikhemikhali ezinobungozi okanye izilwanyana, ngoko udlala ngokukhuselekileyo kwaye ugweme nayiphi na into ephakamisa iiflegi ezibomvu ngutitshala wakho.
Ngaba unokuchaphazela ngokukodwa umrhumo wakho wamanzi okanye i-bill bill (amanzi okanye ukusebenzisa amandla) ngokwenza utshintsho kuwe okanye ukuziphatha kwentsapho yakho? Umzekelo, unako ukulandelela utshintsho olwenzayo, njengamanzi amancinci okanye ukukhanyisa izibane, kwaye urekhode ukusetyenziswa komsebenzisi.
Ziziphi izinto zokungcola kwekhaya ezingasetyenziswa ukucoca amanzi? Imizekelo yezixhobo onokuzama ukuzenza zibandakanya iibhanki zebhanana kunye nezizathu zekhofi.
Ziziphi izinto ezikhanyayo phantsi kombane omnyama ? Ngaba unokusebenzisa ukukhanya kwe-UV ukuze ungayibonakali, mhlawumbi ivumba, iphosi kwindawo yakho okanye kwenye indawo endlwini yakho?
Ngaba ukutshisa i-anyanisi ngaphambi kokusika kukugcina ekulileni ?
Ngaba i-catnip iphambuka amaqhubi angcono kune-DEET?
Ingakanani iviniga kwi- baking soda ikhiqiza i- pumppower ?
Uhlobo olunjani lokubamba iplastiki luvimbela ukukhuphuka kweyona nto ingcono?
Yintoni ekugqibeleni iplastiki ekuthintela i-oxidation engcono?
Yiyiphi ipesenteji yamanandi ngamanzi?
Ingaba inambuzane ebusika ithandwa izibane ngenxa yokushisa okanye ukukhanya?
Ngaba unako ukwenza iJello isebenzise iipinapali ezintsha endaweni yeinanappin ?
Ngaba ikhandlela ezimhlophe zitshisa ngezinga elihlukile kuneemakhandlela ezinemibala?
Ngaba ubukho bamanzi obuncitshisiweyo kumanzi bunokuchaphazela ukukhula kwezityalo?
Isisombululo esipheleleyo se-sodium chloride sisasaza i-Epsom salts?
Ngaba i-magnetism ithintela ukukhula kwezityalo?
Ubume benkcube yeqhankqalaza ithintela njani ngokukhawuleza?
Ngaba iimveliso ezahlukeneyo zepopcorn ziyeke iirhafu ezahlukileyo ezingenakubalwa?
Ukuchaneka ngokuchanileyo abavelisi beqanda bajonga amaqanda?
Ukwahlukana kwimihlaba kuthintela njani ukubambelela kwetheyipu?
Ukuba udibanisa iintlobo ezahlukileyo okanye iimveliso zeziphuzo ezinxilisayo (umz., I-carbonated), ngaba bonke baya kuhlutha inani elifanayo?
Ngaba zonke iipatato zepatato zifana ne-greasy?
Ngaba iintlobo ezifanayo zokukhupha zikhula kuzo zonke iintlobo zesonka?
Ngaba ukukhanya kuthintela izinga apho ukutya kuphahlakele khona?
Ngaba unokusebenzisa ifayile yendlu yamanzi ukususa ilanga okanye umbala kwezinye iilwelo?
Ingaba amandla e-microwave ayichaphazela indlela eyenzeka ngayo ipokuniki kakuhle?
Ngaba zonke iimpawu zee-diapers zithatha umlinganiselo ofanayo? Ngaba kubalulekile ukuba yintoni umbane (amanzi ngokuchasene nejusi okanye ... um .. umchamo)?
Ngaba zonke izitya zokuhlambela i-dishwashing zivelisa umlinganiselo ofanayo? Ukucoca inani elifanayo leitya?
Ngaba umxholo wesondlo wemveliso eyahlukileyo yemifuno (umz
Ziziphi iimpawu zokusisigxina ezisisigxina? Ziziphi iimvumi (umzekelo, amanzi, utywala, iviniga, isisombululo se-detergent) uya kususa inkino? Ngaba iimpawu ezahlukeneyo / iintlobo zabamakishi zivelisa iziphumo ezifanayo?
Ingaba i- washinger detergent ifanelekileyo xa usebenzisa imali engaphantsi kwexabiso eliphakanyisiweyo? Kaninzi?
Ngaba zonke iinwele zesikhumba zibamba ngokufanayo? Ngokude? Ngaba uhlobo lweenwele luchaphazela iziphumo?
Iimpembelelo zithini izongezo ezinamakhristal? Ungongeza umbala wokutya, ukunambitheka, okanye ezinye 'ukungcola'.
Ziziphi na amanyathelo onokuzenza ukuze ukwandise ubungakanani bekristal ? Unokuchaphazela ukutshintsha, ukunyusa, ukushisa, izinga lokukhuphuka, ukuhlanzeka kokukhula kwakho, kunye nexesha elivunyelwe ukukhula kwekristal.
Ziziphi izinto ezichaphazela ukuhluma imbewu? Izinto ezinokuyivavanya ziquka ubukhulu, ubude, okanye uhlobo lokukhanya, ukushisa, ubungakanani bamanzi, ubukho / ukungabikho kweekhemikhali ezithile, okanye ubukho / ukungabikho komhlaba. Unokwazi ukubheka ipesenti yembewu ehluma okanye izinga apho imbewu ihluma khona.
Ingaba imbewu ichaphazelekayo ngobukhulu bayo? Ngaba iintlobo ezahlukeneyo zentsholongwane ziye zahlula iqondo lokuhluma okanye ipesenti? Ngaba ubungakanani bembewu buchaphazela izinga lokukhula okanye ubungakanani bokugqibela besityalo?
Ukugcina ubanda kubathintela njani ukuhluma kwembewu? Izinto onokuzilawula ziquka uhlobo lwembewu, ubude bokugcina, ukushisa kwe-storage, kunye nezinye izinto eziguquguqukayo , ezifana nokukhanya kunye nomswakama.
Ziziphi iimeko ezichaphazela ukuvuthwa kweziqhamo? Khangela i-ethylene kwaye uvale isiqhamo kwisikhwama esitywinwe, ubushushu, ukukhanya okanye ukufuphi kwezinye iziqhamo okanye iziqhamo.
Yimihlaba eyahlukileyo yenzelwe njani ukukhukhula? Unokwenza umoya okanye amanzi kunye nokuvavanya imiphumo yomhlaba. Ukuba unokufikelela kwifriji ebandayo kakhulu, unokwazi ukujonga imiphumo yefriji kunye neengqungquthela.
I-pH yomhlaba ihambelana njani ne-pH yamanzi malunga nomhlaba? Unokwenza iphepha lakho le-pH , uvavanyo i-pH yomhlaba, yongeza amanzi, uvavanye i-pH yamanzi. Ngaba iimpawu ezimbini zifanayo? Ukuba akunjalo, ngaba kukho ubudlelwane phakathi kwabo?
Isityalo sisondele kangakanani kwisifo sokubulala i-pesticide ukuze sisebenze? Ziziphi izinto ezichaphazela ukusebenza kwe-pesticide (imvula? Ukukhanya?)? Unokuyilungisa phi inkunkuma yezilwanyana ezincinci ngexesha uhlala usebenza? Ziyimpumelelo kangakanani inkunkuma engokwemvelo?
I-Alum Crystals Igalari yezithombe
Iiposenti ezili-10 ezona zikhulu kakhulu zoLwaphulo-mthetho kwi-21 Century
Izipho Zomoya: Ubabalo
5 Ixesha leMidlalo yeZihlalo zobukhosi I-Mythology and History impela ngokuchanekileyo
Iingcaphuno zeWinston Churchill
Indlela yokuxhatshazwa ubuhlungu kunye ne-Archangel Raphael